स्वास्थ्य Archives - नमस्ते खबर
स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचार
पहिलो प्रेम अनि सेक्स,के विवाहपूर्व यौनसम्पर्क राखेको थाहा पाउलान् ?
यौन आकर्षण हामी सबैमा स्वाभाविक रूपमै हुने कुरा हो। यौन इच्छा एकदमै तीव्र हुने भए पनि प्रायःजसो नव-युवायुवती यौनसम्पर्क अनि त्यसका असरहरूलाई सामना गर्न आवश्यक रूपमा तयार हुँदैनन्। अर्को व्यक्तिसँग सम्बन्ध विकास गर्दा कति गहिराइसम्म पुगिन्छ भन्ने अनुमान उनीहरू सहजै गर्न पनि सक्दैनन् भने अर्कातिर कति पुगेपछि रोक्नु उचित हुन्छ भन्ने कुरा पनि विवेकपूर्ण रूपमा ठम्याउन सक्दैनन्। ज्ञान भए पनि आवश्यक सीप नहुन सक्छ। ग्रामीण होस् वा सहरी समाजमा युवायुवतीहरूले एक-अर्कामा सम्बन्ध विकास गर्ने विभिन्न अवसर प्राप्त हुने वातावरण हुन्छ। यस्तो बेलामा कसरी सही निर्णय लिन सक्ने भन्ने सीप हुनु…
कतिबेला उत्तम हुन्छ सेक्सको साइत ? सेक्स कतिपटक गर्ने ?
March 16, 2018 namestekhabar
साच्चै भन्ने हो भने सेक्स गर्ने कुनै निश्चित समय छैन न त कति पटक गर्ने भन्ने कुनै वष्तुनिष्ठ सिद्धान्त नै । मानिसहरु आफ्नो समय र उपयुक्तताका आधारमा यौन कर्म गर्ने गर्दछन् ।यद्यपी अधिकांशले भने रातिमा सेक्स गर्ने मान्यता हामीमाझ स्थापित छ । तर, अध्ययनहरुले भनेका छन् कि रातिमा भन्दा विहानको सेक्स उत्तम हुन्छ । कारण एकाविहानै सेक्स गरे दिनभरी ‘मुड फ्रेस’ हुन्छ । अनुशन्धानहरुले विहानमा सेक्स गर्ने विभिन्नकारणहरु पत्ता लगाएका छन् । विभिन्न् अनुशन्धानहरुले विहानको साढे ७ बजेलाई सेक्स गर्ने उपयुक्त रहेको पत्ता लगाएका छन् । इटलीमा गरिएको एक अध्ययनका…
के हो हिस्टेरिया ? के यो बिहे गरेपछि निको हुने रोग हो ?
१७ वर्षीया युवती हुँ । विगत पाँच वर्षदेखि पटक–पटक बेहोस हुने समस्याबाट पीडित छु । मेरो यो समस्याको निदानका लागि घरमा धामी–झाँक्री बोलाउनेदेखि विभिन्न अस्पतालमा पु¥याएर उपचार गर्ने क्रम अहिले पनि जारी छ । मैले छारे रोगको औषधि पनि सेवन गरिसकेकी छु । तर, मेरो समस्या समाधान भएको छैन । स्वास्थ्य जाँचकै क्रममा कतिपय स्वास्थ्यकर्मीले हिस्टेरिया भएको र यसको उपचारका लागि बिहे गरिदिनुपर्छ भन्ने सल्लाह मेरो अभिभावकलाई दिएका छन् । म अहिले ११ कक्षामा अध्ययनरत छु । बिहे नगर्ने पक्षमा छु । हिस्टेरिया भनेको के हो ? के यो बिहे…
विशेष गरि धेरै महिलाहरू यस्ता पुरूषसंग सेक्स गर्न अत्याधिक रूची राख्छन्
महिला र पुरुषवीच हुने सेक्स सम्वन्ध वारे अनेकौं अनुसन्धान भएका छन् र ती अनुसन्धानले धेरै निष्कर्ष निकालेका पनि छ । यस्तैमा हालै गरिएको एक सर्भेक्षणले महिलाहरू यस्ता पुरुषसंग सेक्स सम्वन्ध राख्न चाहन्छन् जसको शरीरमा ठूलाठूला ट्याटु कुँदिएका हुन्छन् भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ । ट्याटुवाला पुरुषसंग महिलाहरू बढी आकर्षित हुने गरेको पाइएको हो । अनुसन्धानमा साढे दुई हजार महिला र पुरुषलाई सहभागि गराइएको थियो । महिला, पुरुष दुवैले यस तथ्यलाई पुष्टि गरेको बताइएको छ । जवकी शरीरमा ट्याटु कुँद्नु स्वास्थ्यका लागि खतरनाक बताइन्छ । यसले छालाको इन्फेक्सन् हुने खतरा हुने गर्छ…
राती सपनामा नचिनेका महिलाहरूसंग यौन सम्पर्क गरेको सपना यस कारण देख्न सकिन्छ।
म २७ वर्षीय अविवाहित पुरुष हुँ । यौन सम्बन्धमा रुचि भए पनि अध्ययनमा व्यस्त हुनुपर्ने भएका कारण मेरी गर्लफ्रेन्ड पनि छैनन्, तर हप्ताको एक–दुई पटकजस्तो स्वप्नदोष हुन्छ । सपनामा आफूले चिनेका अनि नचिनेका महिलासँग यौनसम्पर्क भएको देख्छु । भोलिपल्ट सपनाका कारण मनमा छटपटी हुन्छ । यस्तो समस्या किन हुन्छ ? यस्तो समस्या यौन क्रियाकलाप नभएका कारणले हुन्छ वा मेरो जस्तो उमेरमा सबैलाई हुन्छ अथवा ममा कुनै मनोवैज्ञानिक असरका कारण यस्तो भएको हो ? मिस्टर जी स्वप्नदोषलाई अनुसन्धानकर्ताहरूको भाषामा नक्र्टनल इमिसन्स भनिन्छ र यो विशेष गरी उठ्ने समयमा हुन्छ । २०१४…
कम उमेरमै देखिन थाल्यो सुगरको समस्या ? सुगर जरैदेखि निर्मुल पार्न यसरी विधि पुर्याएर सेवन गर्नुहोस् मेथिको साग
March 15, 2018 namestekhabar
हिजोआज विभिन्न कारण दिन उमेरमा नै सुगर, बाथ, प्रेसर, लगायतका रोगहरु देखि थालेका छन् । यस्ता समस्या सामान्य जस्तो लाग्ने भएपनि यिनले मानिसको आधा प्राण नै लिन्छन् । जब यि रोगले गाँज्दै जान्छन् तब स्वास्थ्य दिनानुदिन प्रतिकुल बन्दै जान्छ । यस्ता रोगहरुमध्ये आज हामी सुगरको समस्या र त्यसका निधनको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । आजको रिर्पोट बनाउने क्रममा हामीले विभिन्न भारतीय अनलाइन तथा भिडियो तथा चिकित्सकहरुको सल्लाह र सुझावलाई मुख्य आधार मानेका छौँ । जसमा मुख्य रुपमा भान्सामा प्रयोग हुने घरेलु सामानहरु औषधिको रुपमा समेत प्रयोग हुन सक्ने कुराहरुलाई हामीले समाधानका…
रुघाखोकी लाग्दा गर्न हुने र नहुने यी कुराहरु थाहा पाउनुस्
एजेन्सी । मौसम परिवर्तनसँगै रुघाखोकी देखा पर्छ । थुप्रै मानिस हरेक वर्ष एक दुईपटक रुघाखोकीको प्रकोपमा पर्छन् । दुई सयभन्दा बढी प्रकारका भाइरसबाट हुने यो रोगलाई सामान्य रोग मानिए पनि यसले निकै सताउँछ। रुघाखोकी सामान्यतया केही दिन वा हप्तामा आफैँ निको हुने गर्छ । त्यति ठूलो उपचारको जरुरत पनि पर्दैन । तर, मानिसलाई यसबाट छिटो उन्मुक्ति पाउन खोजिरहेको हुन्छ । किनकि, यसले दैनिक काममा पनि अवरोध सिर्जना गरिरहेको हुन्छ । घरमा अपनाइने केही सावधानीले यस्तो अवधिलाई छोट्याउन पनि सकिन्छ । जुन धेरै हदसम्म खानामा निर्भर हुन्छ । रुघाखोकी हुदा यसो…
कहिलेकाँही हाम्रो जीवनमा यस्तो हुन्छ कि हामी जीवनमा आफ्नो लागि एकदमै खुसी हुन्छौं । खुसीको बेला हामीले धेरै कुरा भुलिरहेका हुन्छौं, जसले जीवनमा दिर्घकालीन असर पुर्‍याउँछ । चाणक्य नीतिमा यस्ता धेरै जीवनपयोगी सन्दर्भहरु उल्लेख गरिएका छन् । यहाँ भने जवान महिलाले जवानीमा कहिल्यै भुल्न नहुने कुराहरुबारे उल्लेख गरिनेछ । १. शिक्षा सबैभन्दा असल मित्र हो । एक शिक्षित व्यक्तिले हरेक स्थानमा सम्मान पाउँछ । शिक्षाले सुन्दरता र यौवनलाई नै परास्त गरिदिन्छ । २. आफ्नो रहस्यबारे अरु कसैलाई पनि भन्नु हुँदैन । यस्तो बानीले तपाईलाई बरबार बनाउँछ । ३. हामीले विगतको…
सेक्स शारीरिक आवश्यकता हो । यसले जीवनको किशोरावस्थामा मात्रै महत्वपूर्ण भूमिका नखेली जीवनकालमा नै आश्वश्यकता महशुस गरिरहेको हुन्छ । यसैबिच हालै गरिएको एक अध्यनले महिलामा यौन चाहाना उनीहरुको पाको उमेरसम्म पनि रहिरहने देखाएको छ । युनिभर्सटी अफ पिटस्वर्गको एक शोधले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा महिलाहरु वृद्ध हुँदै जाँदा पनि उनीहरुमा यौन चाहाना भने कायम रहने उल्लेख छ । उक्त अध्ययनले महिलाहरु आधा उमेरपछि पनि यौनिक गतिविधीमा संलग्न भैरहने र पुरुष भन्दा बढी समय सम्म यौन जीवनमा सक्रिय हुने देखाएको छ । यस्ता महिलामा पुरुषमा भन्दा पनी बढी हुन्छ सेक्सको आवश्यकता…
महिलाहरू यस्तो बेला आक्रमक सेक्स चाहान्छन् जानीराखौ
गर्भधारणको चाहाना भएका तर बच्चा नभएर तनावमा परेकाहरुका लागि खुसीको खवर छ । हालै गरिएको एक अध्यनले महिलाको मुड अनुसार उनीहरुको प्रजनन क्षमता हुने देखाएको छ । गर्भधारणको चाहाना भएका तर बच्चा नभएर तनावमा परेकाहरुका लागि खुसीको खवर छ । हालै गरिएको एक अध्यनले महिलाको मुड अनुसार उनीहरुको प्रजनन क्षमता हुने देखाएको छ । डेली मेलमा प्रकाशित शोधका अनुसार महिलाको मुड र उनीहरुको प्रजनन क्षमताबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ । शोधकर्ताहरुले महिलाहरुको मुड अनुसार नै उनीहरु गर्भवती हुने कि नहुने भन्ने कुरा निर्धारण हुन्छ । महिलाको मुड पनि शरीरमा हुने हर्मोनको…